दोस्रो बच्चा जन्माउन चाहानुहुन्छ ? यति वर्षको अनतरालमा जन्माउनु हुन्छ परफेक्ट – Sandesh Press
दोस्रो बच्चा जन्माउन चाहानुहुन्छ ? यति वर्षको अनतरालमा जन्माउनु हुन्छ परफेक्ट
August 31, 2021 238
काठमाडौँ । बिहे गरे पछि, हरेक युवतीको एउटा सपना हुन्छ कि उनी सकेसम्म चाँडो एक बच्चा को आमा बनुन्। जब एक युवती विवाह पछि आमा बन्छिन्, उनको खुशी को कुनै सीमा हुदैन। हरेक मानिस चाँडो भन्दा चाँडो बच्चा जन्माउन चाहन्छन्।
प्रत्येक विवाहित जोडी चाहान्छन् कि उनीहरु चाँडै एक बच्चा को आमा बुबा बनुन् र यहाँ यस्ता धेरै जोडीहरु छन् जो एक भन्दा धेरै बच्चाहरु लाई जन्म दिन चाहान्छन् ताकि परिवारको सन्तुलन बनिनै रहोस्।
यो अक्सर देखिएको छ कि एक बच्चा को जन्म पछि, दम्पतीहरु आफ्नो परिवार को योजना फेरी शुरू गर्छन् र चाँडै उनीहरु अर्को बच्चा चाहन्छन्, तर एक बच्चा को जन्म परिवार नियोजन मा सीमित छैन। यदि तपाइँ पहिलो बच्चा पछि दोस्रो बच्चा पाउन चाहानुहुन्छ, तब यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि उनीहरु बीच एक अन्तर हनुपर्दछ।
यस बाहेक, यदि एक महिला धेरै ढिलो आमा बन्छिन् भने, तब यसले नोक्सान पुर्याउँछ। यदि कोहि एक धेरै छोटो समय मा अर्को बच्चा को लागी प्लान गरीरहेका छन् भने, तब धेरै समस्याहरु यस्तो स्थिति मा पैदा हुन थाल्छन्।
जब नयाँ नयाँ नयाँ विवाह हुन्छ उनीहरुलाई थाहा हुँदैन कि पहिलो सन्तान पछि दोस्रो बच्चाको बीचमा कति बर्ष को अन्तर हुनु पर्छ। यदि धेरै छिटो अर्को बच्चाको योजना गरेमा यसको कारणले धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुन्छ ।
यदि तपाइँ पनी विवाहित हुनुहुन्छ र दोस्रो बच्चा को लागी योजना बनाइरहनुभएको छ भने तपाईले कति वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउनु ठिक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन भनेआज हामी यस पोष्टको माध्यमबाट हामी तपार्यलाई बताउँने छौ कि कति वर्षको अन्तरालमा दोस्रो बच्चा जन्माउनु उचित हुन्छ ।
दुई बच्चाहरु को बीच कति उमेर को अन्तर हुनु पर्छ?
अध्ययन अनुसार यदि एक दम्पतीले आफ्नो दोस्रो सन्तानको योजना बनाइरहेका छन् भने यस्तो स्थितिमा दुई बच्चाहरु बीच कम्तीमा डेढ बर्ष देखि दुई बर्ष को अन्तर हुनु पर्छ। यदि एक जोडी एक र एक आधा बर्ष भन्दा पहिले दोस्रो बच्चा को लागी योजना बनाइरहेको छ, तब यस्तो स्थिति मा तपाइँको अर्को बच्चा को वजन कम हुन सक्छ। यो मात्र हैन, एक समय भन्दा पहिले बच्चा हुने सम्भावना पनि छ।
एक विशेषज्ञ भन्दा बढी, तपाइँलाई यो कुराको बारेमा थाहा हुन्छ कि जान्नुहुन्छ कि तपाइँ आफ्नो परिवारलाई कहिले अगाडि बढाउन चाहानुहुन्छ र तपाई अर्को बच्चा कहिले चाहानुहुन्छ। यदि तपाइँ कम अन्तरमा र चाँडै दोस्रो बच्चा जन्माउन चाहानुहुन्छ भने तब तपाईलाई यसको कारण दुबै फाइदा र हानि हुन्छन्।
यदि तपाई दास्रो बच्चा जन्माउन को लागी धेरै जवान हुनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा गर्भवती हुने महिलाले बढि ध्यान दिनुपर्दछ । तपार्य यस मामिलामा डाक्टरको सहायता पनि लिन सक्नुहुन्छ।
केहि अध्ययनहरु को अनुसार, यदि तपाइँको दोस्रो गर्भावस्था को बीच एक बर्ष भन्दा कम को अंतराल छ, भने यस्तो स्थिति मा पहिले नै बच्चाको डिलीवरी हुने संभावना बढ्छ। यो मात्र हैन, यसका साथै धेरै रोगहरु को जोखिम पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा आमाको ज्यान पनि जोखिममा हुन्छ।
यदि पहिलो डिलीवरी सी-सेक्शन हो, तब दोस्रो बच्चालाई चाँडै जन्म दिनाले आमाको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पार्न सक्छ। यदि पहिलो डिलीवरी को दौरान प्रयोग गरीएको टाँका राम्रो संग सुकेको छैन, तब यदि तपाइँ दोस्रो डिलीवरी को योजना बनाउनुहुन्छ, भने त्यो टाँका धेरै छिटो खोल्न सक्छ।
जान्नुहोस् एक ढिलो आमा बन्ने को बेफाइदा के हो ?
यदि दुई बच्चाहरु को बीच एक लामो समय को अंतर छ, तब यस्तो स्थिति मा, धेरै पटक प्रजनन क्षमता कमजोर हुन थाल्छ, जसको कारण दोस्रो बच्चा को इच्छा अपूर्ण रहन सक्छ। यदि बच्चा ठूलो उमेर मा जन्म दिईन्छ, तब यो कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै प्रकार का समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ।
हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि केहि विशेषज्ञहरु भन्छन् कि पहिलो बच्चा पछि, ३ बर्ष को एक अन्तर राख्नुपर्दछ । किनकि यदि तपाइँ यस्तो फरक राख्नुहुन्छ भने तपाइँ दुबै त्यस्ता बच्चाहरु लाई ठीक संग हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो बच्चा पछि दोस्रो बच्चा मा ३ बर्ष को फरक को कारण, पहिलो बच्चा हिँड्न र आफ्नै खेल्न थाल्छ। यस तरिका मा, तपाइँ अन्य बच्चा लाई पूरा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ।
कहिल्यै पनि अर्को बच्चा जन्माउने योजना बनाउँदा कुनै दबाब मा कहिल्यै नआउनुहोस्। तपाइँको घर को आर्थिक स्थिति लाई ध्यानमा राखी, अर्को बच्चा बनाउने योजना बनाउनुहोस्।
Prevवर्षा अझै ३ दिन रहने, बाढी पहिरो जान सक्ने भएकाले सतर्क रहन मौसम विज्ञान विभागको आग्रह